जोखिम नटर्दै आन्दोलन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
‘पहिलो र दोस्रो लहरमा अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएर संक्रमितले ज्यान गुमाएको थाहा हुँदाहुँदै सडक आन्दोलन गर्नु गलत’
असार ११, २०७८ मकर श्रेष्ठ
काठमाडौँ — पछिल्लो २४ घण्टामा १२ हजार २ सय ३२ पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा २ हजार ४ सय ७४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । परीक्षण गरेकामध्ये कोरोना पोजिटिभ हुने दर २० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध काठमाडौंको रामशाहपथमा बिहीबार विरोध प्रदर्शन गर्दै विद्यार्थी संगठन । तस्बिर : सन्जोग मानन्धर/कान्तिपुर
असारयता बुधबार मात्रै संक्रमण दर १९.५० प्रतिशत थियो । अरू दिन २० प्रतिशतभन्दा बढी छ । कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि दैनिक सरदर ४० जना छ । बिहीबार भने २४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा अझै पनि भेन्टिलेटर पाउन मुस्किल छ । पाटन अस्पतालका १० वटा भेन्टिलेटर सबैमा कोरोनाका गम्भीर बिरामी छन् । तर यस्तो अवस्थाको बेवास्ता गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरू अहिले सरकारको विरोधका नाममा सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नागरिकहरूको स्वास्थ्यसँग गम्भीर खेलाँची गर्दै बिहीबारबाट विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध विद्यार्थी भ्रातृ संगठन सडक प्रदर्शनमा उत्रिए ।
काठमाडौंमा ४ हजार ४ सय ८३ जना सक्रिय संक्रमित छन् । कोरोना संक्रमणको जोखिम टरिनसकेको अवस्थामा यही बिहीबार दुई वटा प्रदर्शन भए । प्रदर्शनी मार्गमा संसद् विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध विद्यार्थी संगठनले प्रदर्शन गरे । नेविसंघ, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, एमाले खनाल–नेपाल पक्षीय अनेरास्ववियु, जसपा निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल छैटौंका विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । त्यस्तै, माइतीघरमा जातीय विभेदविरुद्ध दलित अधिकारकर्मी, विद्यार्थीलगायतले पनि प्रदर्शन गरे । सो क्रममा नेपाल राष्ट्रिय उत्पीडित विद्यार्थी संगठन र दलित अधिकारकर्मीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत पाएका कृष्णगोपाल श्रेष्ठको पुत्ला दहन गरे ।
सरकारविरुद्ध प्लेकार्ड लिएर उपस्थित भएकाहरूले न सामाजिक दूरी कायम गरेका थिए न त सबैले मास्क लगाएका थिए । आन्दोलनका क्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच घम्साघम्सीसमेत भयो । ‘सरकारको कदमको विरोधमा तीन–चार सय सहभागी भएका थियौं,’ अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले दाबी गरे, ‘जति सहभागी थियौं, सबैले सामाजिक दूरी कायम गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाबाट विरोध प्रदर्शन गर्‍यौं ।’ संसद् पुनःस्थापना नभएसम्म प्रदर्शन जारी राख्ने कार्यक्रम तय भएको उनले बताए । विज्ञहरू भने महामारीका बेला जुलुस निकाल्नुलाई अपराध गरेसरह ठान्छन् । पहिलो र दोस्रो लहरमा अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएर संक्रमितले ज्यान गुमाएको थाहा हुँदाहुँदै आन्दोलन गर्नु गलत भएको जनस्वास्थ्य विज्ञले बताए ।
‘उहाँहरूलाई कोरोनाको जोखिमभन्दा पनि के गर्दा राजनीतिमा चर्चा कमाइन्छ भन्ने हुँदो रहेछ,’ भाइरोलोजिस्ट एवं ईडीसीडीका पूर्वनिर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले भने, ‘निषेधाज्ञा त जुलुस गर्न खोलेजस्तो पो भयो ।’ कोरोनाका नयाँ–नयाँ जोखिमपूर्ण भेरिएन्ट देखिए पनि राजनीतिक दलका नेता र भ्रातृ संगठनहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वास्थ्यपूर्तिका लागि आन्दोलन गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘भाइरसको नयाँ रूप डेल्टा प्लस देखिएको छ । संक्रमण सार्ने र फोक्सोको सेलभित्र जाने क्षमता यसमा बढी छ । जसले एन्टिबडीको क्षमता घटाउँछ,’ पाण्डेले भने, ‘यस्तो जोखिम कायम हुँदाहुँदै आन्दोलन गर्नु भनेको आगोको भुङ्ग्रोमा हाम फालेजस्तै हो ।’
यस्ता आन्दोलन, प्रदर्शनले संक्रमण दोस्रो लहरकै जस्तो दोब्बर, चौबर रूपमा फैलिन सक्ने उनले चेतावनी दिए । दोस्रो लहरमा हरेक चार दिनमा दोब्बरसम्म संक्रमण देखिएको थियो । बिहे भोजजस्ता जमघटबाट संक्रमण बढी मात्रामा फैलिएको थियो । ‘तेस्रो लहरमा पनि नयाँ भेरिएन्ट देखिएका बेला आन्दोलन सुरु भएको छ । यस्तो हुने हो भने संक्रमण बढ्ने सम्भावना हुन्छ,’ डा. पाण्डेले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जोखिम उच्च रहेकै बेला हुने आन्दोलनले संक्रमण फैलाउन सहयोग पुग्ने बताए । निषेधाज्ञा कोरोनाको जोखिम कम भएर खुकुलो पारेको नभई सर्वसाधारण आत्तिएकाले सहज बनाएको उनको भनाइ छ । ‘संक्रमण कम भएको देखिए पनि अस्पतालमा गम्भीर खालका बिरामी भर्ना भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक स्थलमा सभा, जुलुस गर्‍यो भने संक्रमित संख्या बढ्न सक्छ । यस्ता गतिविधिले अस्पतालमा बेड व्यवस्थापनमा समेत चुनौती हुन्छ ।’ खोप सबैले पाइनसकेकाले पनि जोखिम निकै रहेको उनले बताए । ‘यसको असर एकै दिनमा देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यसरी नै आन्दोलन हुने हो भने २ बाट ४, ४ बाट ८ हुन सक्छ । सबैले सावधानी अपनाउनु जरुरी छ ।’
संक्रमण दर १० प्रतिशतभन्दा तल नआएसम्म जोखिम कम नमानिने उनले बताए । ‘अहिले पीसीआर र एन्टिजेन्ट गरेकामध्ये २० प्रतिशभन्दा बढीलाई कोरोना देखिएको पनि निषेधाज्ञाका बेला हो,’ डा. अधिकारीले भने, ‘निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि यसको असर कति पर्ने हो, आकलन गर्नै सकिँदैन ।’
प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०८:२३
युरो २०२० का लिग चरणका खेल सकिएका छन् । अब के त ? फ्रान्स अझै पनि उपाधिका लागि सबैभन्दा बलियो प्रत्याशी हो । अरु केही टिमले पनि राम्रो खेलेर धेरैको मन चोरेका छन् । जतिबेला नकआउट चरणका खेल सुरू हुनेछन्, प्रतियोगिता अझ रोमाञ्चक हुनेछ ।
असार ११, २०७८ रोरी स्मिथ
न्युयोर्क टाइम्स — बुडापेस्टमा चलिरहेको खेल सकिन केही मिनेटमात्र बाँकी थियो । फ्रान्सेली मिडफिल्डर एडरिन राबोटले आफ्ना पोर्चुगाली विपक्षी खेलाडी सर्जियो ओलिभेरातर्फ हेरे अनि सल्लाह दिए, पछाडि हट्नु ।
रंगशालामा जति थिए, राबोटलाई जस्तै सबैलाई थाहा भइसकेको थियो, युरो २०२० को समूह चरण समाप्त भएको छ । खाली औपचारिकता मात्र बाँकी थियो । फ्रान्स र पोर्चुगल दुवै नकआउट चरण पुगिसकेका थिए । यस्तो धक्कामुक्की खाएर खेलाडीले किन खेल्ने प्रयास गर्नु ?
अबको काम त घडीमा नजर लगाउनु मात्र थियो । खेल आफैमा दुवै टिमका लागि उतारचढावपूर्ण रह्यो । खेलले छिनछिनमा रंग फेरिरह्यो । पोर्चुगलले अग्रता लियो, फेरि फ्रान्सले । पोर्चुगल फेरि खेलमा फर्केको थियो । यस्तै टिमको भाग्य पनि फेरिइरहेको थियो । खासमा भाग्य उनीहरूको हातमा मात्र थिएन, म्युनिकमा जर्मनी र हंगेरीबीच चलिरहेको खेलमा पनि थियो । समूहका चारै टिमलाई विश्वास थियो, आफू अर्को चरण पुग्नसक्ने ।
जतिबेला लियोन गोरेट्ज्काले जर्मनीका लागि गोल गर्दै एक अंक कमाए । सबै समीकरण पूरा भए । हंगेरी अभाग्यशाली रह्यो । तर ठूला मान्न मिल्ने तीनै टिमले अन्तिम १६ को यात्रा तय गरे । र, यसले युरो २०२० मा केही खुबै स्वाद लिएर हेर्न मिल्ने खेल जुराएको छ । जस्तो, आइतबार सेभियामा पोर्चुगलले बेल्जियमको सामना गर्दै छ । मंगलबार लन्डनमा इंग्ल्यान्डले फेरि एकपल्ट जर्मनीसँग फुटबल मैदानमा युद्ध छेड्नेछ ।
फ्रान्स बलियो, अरू कमजोर नठानौं
खासमा वास्तविक खेल अब पो सुरु हुनेछ । विश्व च्याम्पियन फ्रान्सले नकआउट चरणको यात्रा त्यति सजिलै पूरा गरेन, जति यसका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स र इटालीले गरे । तर यही तथ्यले कथाका सबै पाटो खोल्दैन । फ्रान्सका विपक्षी टिम नै बलिया थिए । पोर्चुगल त युरोको डिफेन्डिङ च्याम्पियन भइहाल्यो । हंगेरी पनि आफैमा कमजोर थिएन । जर्मनीलाई हराउन मात्र चुकेको थियो, आफ्ना जोडदार समर्थकसामु ।
फ्रान्सले पोर्चुगलविरुद्ध समूहको अन्तिम खेल मज्जाले खेल्यो । जतिबेला खेलले माग गर्छ, फ्रान्सले त्यतिबेला त्यहीअनुसार प्रदर्शन गर्न सक्षम छ भनेर देखायो । जतिबेला राबोट, पाउल पोग्बा र अन्य खेलाडीले राम्रो खेल्छ, त्यतिबेला केलियन एमबाप्पेले अहिलेसम्म गोल गरेको छैन भन्नुको अर्थ छैन । एमबाप्पे यसरी नै चुप रहन्छ भन्ने पनि छैन । फ्रान्स खासमा जर्मनी, पोर्चुगल, बेल्जियम, इंग्ल्यान्ड र स्पेनजस्ता टिमभन्दा उम्दा नै देखिएको छ ।
नत्र, फ्रान्स त्यस्तो समूहमा थियो, कुनै प्रकारको तलमाथि निको हुने खालको थिएन । इटाली र नेदरल्यान्ड्सले पक्कै पनि सबैलाई प्रभावित पारेको छ । दुवै टिममा युवा छ, त्यसैले यसमा ढिलोचाँडो छिद्र पर्न सक्छ । अझै फ्रान्स नै यस्तो टिम हो, जसको हारका लागि सबैले प्रतीक्षा गरिरहेका हुनेछन् ।
‘समय सबथोक हो’
रोबर्टो मानचिनीको एउटा इच्छा थियो । युरो २०२० सुरु हुने पूर्वसन्ध्यामा इटालीका यी प्रशिक्षकले भनेका थिए, दशक जति समयको खराब प्रदर्शनपछि आफ्नो टिमले फेरि एकपल्ट सर्वसाधारण फुटबलप्रेमीको मन जितोस् । इटालीको खेलमा फेरि चमक फर्कियोस् । उनका खेलाडीले यही काम गरेका छन् । इटालीले आफ्नो समूहको सबै तीन खेल जितेको थियो । रोमन समर्थकअगाडि इटालीले रोमाञ्चक, कल्पनाशील फुटबल खेलेको छ ।
नेदरल्यान्ड्स पनि साँच्चै कम्तीको रहेन । यसपल्टको प्रतियोगितामा कुनै टिम आफैमा परिपूर्ण देखिएको छ भने त्यो यही नेदरल्यान्ड्स नै हो । डच टिमको खेल हेर्न पक्कै धेरैलाई मज्जा आएको हुनुपर्छ । नेदरल्यान्ड्सले अहिलेसम्म कुनै गोल खाएको छैन, रक्षापंक्तिमा पनि यो सानोतिनो इटाली नै हो । यहाँनिर एउटा तथ्य सबैले बुझ्नुपर्छ, लिग चरणमा राम्रो खेल्दैमा त्यसले नकआउट चरणमा पनि राम्रै गर्छ भन्ने कुनै ठोकुवा छैन ।
युरोका प्रत्येक संस्करणमा त्यस्ता एकाध टिम हुने गर्छन्, जसले धेरैको मन जित्छ । यस्तै काम सन् २००४ मा चेक गणतन्त्र, सन् २००८ मा नेदरल्यान्ड्स र सन् २०१६ मा इटालीले गरेका थिए । तर, जतिबेला नकआउट चरण आयो, सबैको हावा फुस्स उड्यो । सायद इटालीले अबको खेलमा अस्ट्रियालाई लडाउन सक्छ । बेल्जियमले भने यही चरणमा कडा चुनौती सामना गर्ने पक्का छ, पोर्चुगलको रूपमा । कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीले प्रतियोगिता ढिला हुँदा इटालीलाई फाइदा नै भएको छ ।
रोबर्टो मार्टिनेजको टिमले लिग चरणका सबै खेल जित्यो । यो फिफा वरीयताको नम्बर एक टिम हो । प्रतियोगिताकै सबैभन्दा बुढो टिम पनि हो यो । लाग्छ, अहिलेको बेल्जियम टिमले त्यो सबै पछाडि छाडिसकेको छ, जसलाई उत्कृष्ट टिम भन्न सकिन्छ । इटालीको टिममा भने यस्तै भाव आउन अझै बाँकी छ । वास्तवमै समय सबथोक हो ।
केहीको यात्रा सजिलो, कसैलाई गाह्रो
एक प्रकारले भन्दा यसपालि युरोको खेल ढाँचा गज्जबको छ । स्विट्जरल्यान्डले आइतबार राति जित निकालेको थियो, तर सोमबारमात्रै त्यो जितको खास अर्थ थाहा पायो । युक्रेन सोमबार पराजित त भयो, तर बुधबार पुगेपछि आफ्नो भाग्यबारे बुझ्यो । यस्तो पर्खाइको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ । तर नेदरल्यान्ड्स त्यस्तो टिम रह्यो, जसले एम्स्ट्रडममा भएको अन्तिम खेलअगाडि नै थाहा पाइसकेको थियो, समूह जित्ने आफैले हो । अनि यो खेलअगाडि नै निश्चित भइसकेको थियो, उत्तरी मेसेडोनिया खाली औपचारिक पाहुनामात्र हो ।
अन्तिम खेलअगाडि नै उसको चुनौती सकिसकेको थियो । शनिबार एम्स्ट्रडममा वेल्सले डेनमार्कको सामना गर्नेछ । दुवै टिम आआफ्नो समूहमा उपविजेता थिए । अस्ट्रिया यस्तै टिम थियो, जसले इटालीको सामना गर्नुपरेको छ । स्पेनले आफ्नो समूह जित्न सकेन, किनभने स्विडेनले अन्तिम क्षणमा आएर पोल्यान्डलाई हरायो । तर केही टिम यस्तो पनि रहे, जसले नकआउट चरण पुग्ने निकै कठिन यात्रा नै तय गर्नुपर्‍यो ।
अबको बाटो सबैभन्दा गाह्रो कसैलाई छ भने त्यो बेल्जियमलाई छ । सबैभन्दा पहिला पोर्चुगलको सामना गर्नुपरेको छ । त्यसपछि क्वाटरफाइनल पुगे फ्रान्स अगाडि आइपुग्न सक्छ । त्यसपछि अगाडि बढ्न सके स्पेनले बाटो कुरिरहेको हुन सक्नेछ । यसको ठीक उल्टो इंग्ल्यान्ड र जर्मनीका लागि आफैंमा पहिलो खेल निकै कठिन छ, तर त्यसपछि धेरै हदसम्म सजिलो हुनेछ । त्यसपछि स्विडेन वा क्रोएसिया हुनेछ, झन् त्यसपछि सम्भवतः नेदरल्यान्ड्स हुन सक्नेछ ।
स्विट्जरल्यान्डमा त्यस्तो के छ ?
सन् २०१४ मा ब्राजिल, सन् २०१६ मा फ्रान्स, सन् २०१८ मा रुसमा जस्तै स्विट्जरल्यान्ड फेरि एकपल्ट ठूलो प्रतियोगिताको क्वाटरफाइनल पुगेको छ । प्रश्न उठ्न सक्छ, स्विस टिममा त्यस्तो के छ त ? भन्न कर लाग्छ, स्विस फुटबल अहिले स्वर्णिम समयबाट गुज्रिइरहेको छ । टर्कीमाथि स्विस टिमले जस्तो जित निकालेको थियो, त्यसको प्रशंसा गर्नुपर्छ । स्विस टिम जस्तै केही देश निकै धनी छन् तर जनसंख्या कम । फुटबल राम्रो खेल्छ ।
यहाँ टर्की र रुसजस्ता टिम पनि छन् । यी दुवै ठूला देश हुन् । जनसंख्या बाक्लै छ । तर यी दुई युरो २०२० का असफल टिम रहे । सन् २००२ मा विश्वकपको तेस्रो स्थान जितेयता टर्कीले त्यस्तो केही गर्न सकेको छैन, जसका लागि हेक्का राख्न सकियोस् । तीन वर्षअगाडि आफ्नै देशमा भएको विश्वकपमा रुसले ठीकठाक त खेल्यो, तर यसपल्ट केही गर्न सकेन । अचेल रुसले खेलाडी उत्पादन गरेर निर्यात गर्न छाडेको छ । टर्कीमा त स्तरीय खेलाडी पनि उत्पादन हुन छाडेको हो कि ?